အမျိုးသမီးတွေ ပြီးတယ်ဆိုတာ… – Gentleman Magazine
ဆရာ အတ္တကျော်ဘလောက်ကနေ ပြန်ယူထားတာပါ.. ဖိုမရေးရာ ကိစ္စစိတ်မ၀င်စား ရင် သို့မဟုတ် ရိုင်းတယ်ထင်ရင် ..ဆက်မဖတ်ပါနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်…သည်ဘလော့ကို ဖတ်ရတာ အသိ ဗဟုသုတ တိုးပါတယ်။ ။
ပြီးခြင်း မပြီးခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ မသိဘူး…??? မသိလို့ မေးတာပါ။
ပထမဆုံးက အဖြေရကျပ်ဆို နှာချေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် သမ်းဝေတာနဲ့ နှိုင်းလိုက်ရင် အဖြေရကျပ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းသွားမှာပါ။ နှာချေချင်တဲ့အခါ ဟတ်ချိုးလို့ ချေလိုက်ရချိန်မှာ ဘယ်လို ခံစားရလဲလို့ မေးရင် ဘယ်သူ ဖြေနိုင်မလဲ။ ကိုယ်ခန္ဒာမှာ အဲဒီ့အချိန် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ၊ ဘာလဲ၊ နှာချေတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဖြေကြည့်စေချင်ပါတယ်။ လူတိုင်း ချေဖူးပေမယ့် နှာချေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလေးပါလို့ အင်မတန် အပြောရ ခက်ပါတယ်။ သမ်းလိုက်တာလည်း အတူတူပါပဲ။ ပါးစပ်ကို အားရပါးရ ဟပြီး ၀ါးခနဲ သမ်းလိုက်တာတော့ မှန်တယ်။ အဲဒါ ဘာလဲ၊ ဘယ်လို ခံစားရလဲဆိုတာ အလွန် အဖြေရခက်လှပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ပြီးတယ်ဆိုတာလည်း အလားတူပါပဲ၊ အဖြေရ ကျပ်လှပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက်ကျတော့ သူ့ငယ်ပါကနေ သုက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်တာကို ပြီးတယ်လို့ အပြတ်အသား ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးမှာကျတော့ အဲလို ရုပ်လက္ခဏာနဲ့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာ ဘာမှ မရှိဘူး။
နောက်တစ်ချက်က အနောက်တိုင်း သုတေသနများအရ အမျိုးသမီး ၂၅ % သာလျှင် ချစ်တင်းနှောရင်း (၀ါ) လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားကျတော့ ၉၀ % ကျော်ဖြစ်နေတာနဲ့ကို ဒါဟာ အင်မတိ အင်မတန် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ကြုံခဲ့ဖူးတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အသက် ၆၀ ကျော် မိတ်ဆွေသစ်တစ်ဦးနဲ့ ခရီးအတူသွားဖြစ်ကြရင်း ရင်းနှီးလာလို့ သည်ကိစ္စတွေ ပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါ သူက အမျိုးသမီးတွေ မပြီးဘူးလားလို့ တအံ့တသြ မေးလာပါတယ်။ တကယ်တော့ သူဟာ မြေးရနေပြီဖြစ်တဲ့ ကလေးသုံးယောက် ဖခင်ပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို မေးမိတယ်။ “ဘာလဲ အစ်ကိုကြီးက အစ်ကိုကြီး မိန်းမကို ပြီးလားလို့ မေးတတ်တယ် မဟုတ်လား”ဆိုတော့ ဟုတ်တယ်လို့ သူက ဖြေပါတယ်။ ဒါနဲ့ “ဟိုကလည်း ခေါင်းညိတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြီးတယ်လို့ ပြောတာချည်းပဲ မဟုတ်လား”ဆိုတော့ သူက ဟုတ်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော့်မှာ တအား ရယ်ချင်သွားပေမယ့် သူ့ကိုရော သူ့မိန်းမ အမယ်ကြီးကိုပါ သနားမိသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာက သည်လိုအကြောင်းအရာတွေကို လူသိရှင်ကြား ချပြဆွေးနွေးလို့ မရတာမို့ အများစုဟာ ထင်တစ်လုံးနဲ့ ရမ်းကြိတ်နေကြပါတယ်။ သူလို အမျိုးသားတွေက ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၉၀ % မက ရှိနေမှာလည်း အသေအချာပါပဲ။
ကိုင်း… အမေးရှိတော့ အဖြေရှိလာပါပြီ။
ပထမဆုံး လိင်ဆက်ဆံမှု မစတင်ခင် အပျိုးကာလက အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ အမျိုးသားတွေကတော့ “ဆင်လိုက်တုန်းတောင် ငယ်ပါတင်းနိုင်ကြသူများ”ဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေက ဆင်လိုက်တာ ဝေးစွ၊ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ကြောင့်ကြနေမိတာနဲ့ လိင်စိတ်နိုးကြားဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာနေပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ မိသားစုကိစ္စတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေက လွှမ်းမိုးထားစမြဲပါ။ ဒါ့ကြောင့် အပျိုးကာလနဲ့ သူတို့ကို စိတ်ပြောင်းအောင် လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အပျိုးမှာ အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ပထမဆုံးက လင်ကိုမယား စိတ်လက် ကြည်ကြည်သာသာနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူး ရှိအောင် လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ လက်ကလေး ကိုင်တာ၊ ပါးကလေးနမ်းတာ၊ ဆံပင်ကလေး နမ်းတာလေးတွေဟာ တကယ့် အပျိုးပါပဲ။ အိမ်ထောင်သက် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပဲ ရှိနေနေ မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အထဲမှာ အဲဒါတွေ ပါပါတယ်။
အဲဒီ့ကမှတစ်ဆင့် အရှိန်လေး နည်းနည်း ရပြီဆိုရင် ပြင်သစ်အနမ်း၊ အနမ်းစို စသဖြင့် ခေါ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတာက ဆက်လာရပါတော့မယ်။ သည်မှာလည်း လင်ရယ် မယားရယ်ဖြစ်လာမှတော့ တစ်ယောက်တစ်ယောက် ရွံနေလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ အမျိုးသမီးအတော်များများက အဲဒီ့အနမ်းကို မတုံ့ပြန်တတ်ဘူး။ ရွံ့နေတတ်တယ်။ အဲတော့ အမျိုးသားက သင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသားကလည်း တတ်ဖို့ လိုတာပေါ့ဗျာ။ ပြင်သစ်အနမ်း ဋီကာကို နောက်ကျတော့မှ တစ်ပုဒ် သတ်သတ် ရေးပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား။
အဲဒီ့အဆင့်ကနေ နောက်တစ်ဆင့် တက်ရာမှာလည်း မလောရပါဘူး။ ယောက်ျားအများစု မှားတတ်တဲ့ အမှားက နမ်းရင်းနဲ့ သူ့လက်ကြီးက အမျိုးသမီးရဲ့ ရင်သားဆီ တန်းရောက်သွားတတ်တာပဲ။ ဟား… အလွဲကြီး ခင်ဗျ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာမှာ အာရုံနိုးတဲ့နေရာတွေ များစွာ ရှိပေမယ့် ရင်သားကို တန်းသွားတာကြီးက နေရာမကျဘူးခင်ဗျ။ ဖက်ထားရင်းကနေ လက်မောင်းလေး ပွတ်၊ ကျောလေးပွတ် လုပ်ရတယ်။ ရင်ခုန်လာအောင် နှူးရတယ်။ သူ့လက်ကြီးက ငါ့ရင်သားဆီ ရောက်လာတော့မှာ… ဟော… ရောက်တော့မယ်… ဟင်… ဟုတ်လဲ ဟုဘ်ဘူး… အဲဒီ့ ရွှေလက်က ဘယ်ရောက်သွားရပြန်တာလဲ မောင်ရယ်… ဟင့်… ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာအောင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် လုပ်နိုင်လေ အခြေအနေ ကောင်းလေလေပါပဲ။
အဲလိုနဲ့ ရင်သားတွေကို ညင်ညင်သာသာ ထိတွေ့ပေးရပါတယ်။ ချိုလုံးလေးတွေကိုလည်း အတူတူပေါ့။ ညင်သာဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးအနေနဲ့ သူ့ကို ချစ်တယ်၊ မြတ်နိုးတယ်၊ ယုယတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှု ရလာအောင် လုပ်ရမှာပါ။ နှုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်ထားတာလည်း မပျက်စေဘဲ လက်က ရင်သား၊ ခြေထောက်က ခြေထောက်ချင်း ပွတ်သီးပွတ်သပ် ကယုကယင် နေပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အဲဒီ့ကမှ အရှိန်လေး တော်တော်ရပြီဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းကို နေရာ ရွှေ့လို့ ရပါပြီ။ သည်နေရာမှာ ပစ်မှတ်က ချိုလုံးတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒါကိုလည်း အလောတကြီး မဟုတ်ဘဲ သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်း ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့လေး လုပ်ပေးတတ်ဖို့ လိုပြန်ပါတယ်။ လုပ်တတ်ရင် အမျိုးသမီးဘက်က အတော့်ကို အဆင်သင့်ဖြစ်လာပါပြီ။
ပါးစပ်က နေရာရွေ့သွားတော့ လက်က အားနေတယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲလို့ မေးရင် အဖြေရှိပါတယ်။ လက်က ဗိုက်သား၊ ဆီးခုံ၊ ပေါင်၊ ဒူး စတာတွေကို ညင်သာစွာ ထိတွေ့ပေးနေနိုင်ပါတယ်။ သည်မှာလည်း ဦးတည်ချက်က ယောနိဖြစ်ပေမယ့် ရင်သားမှာတုန်းကလိုပဲ အမျိုးသမီးက အလိုချင် အတောင့်တဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်လာတဲ့အထိ ရစ်သီ ရစ်သီနဲ့ အရစ်ရှည်နိုင်လေ အကျိုးရှိလေပါ။ တကယ်လို့ အဲဒီ့နေရာကို လက်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ပါးစပ်နဲ့ပဲ စခန်းသွားလိုသေးတယ်ဆိုရင်လည်း လက်က ယောနိကလွဲလို့ ခါးအောက်ပိုင်း ကျန်တဲ့ နေရာအနှံ့ကို ထိတွေ့ထားနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်နဲ့ ထိတွေ့ဖို့ ကြံရင်လည်း ချက်ချင်း တန်းမသွားသင့်သေးဘူး။ အမျိုးသမီး သိပ်လိုချင်လာအောင် ရစ်သီရစ်သီ လုပ်ပေးဖို့ လိုတယ်ခင်ဗျ။
ဒါဟာ အပျိုးကာလပါပဲ။ အတွေ့အကြုံ နည်းသူ အမျိုးသမီးများအတွက် အဲဒီ့ အပျိုးကာလဟာ နာရီဝက် ၄၅ မိနစ်လောက် အချိန်ယူဖို့ လိုပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ရင့်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အပျိုးကို အဖျင်းဆုံး မိနစ် ၂၀ လောက် အချိန်ယူရပါမယ်။ ကြာလေ၊ အချိန်ဆွဲနိုင်လေ၊ အမျိုးသမီးအတွက် အရှိန်တက်လေပါ။
အဲလို အရှိန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသမီးဟာ မသိမသာလေး နွေးလာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဆန္ဒတွေ တက်ကြွလာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုယ်ခန္ဒာက သွေးတွေကလည်း ယောနိနဲ့ ယောနိထိပ်က အကြောဆိုင် အဖုအထုံး (အစေ့လေး)ဆီကို တိုးနေပါပြီ။ သည်အချိန်မှာ ယောနိအတွင်းပိုင်းနံရံကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချွေးသီးချွေးပေါက်များကျသလို စိမ့်ရာက နစ်လာပါတော့မယ်။ သည်အချိန်မှာမှ လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်ရတော့မှာပါ။
အဲလိုနဲ့ အာရုံက ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ သွေးက တင်ပါးဆုံရိုးတ၀ိုက်မှာ ဆက်ပြီး တိုးနေပါတယ်။ အသက်ရှူလည်း ပြင်းလာတယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းလည်း တက်လာပါပြီ။ ယောနိရဲ့ အတွင်းပိုင်းကလဲ ငယ်ပါကို ဆုပ်ညှစ်ဖို့အတွက် ကျဉ်းသွားသလို အပြင်ပိုင်းကကျပြန်တော့ ငယ်ပါကို ကြိုဆိုဖို့အတွက် ကျယ်လာပါတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေနေပြီ၊ အနှောင့်အယှက် ကင်းနေပြီ၊ ဖုန်းလည်း ထမမြည်ဘူး၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကလည်း အခြေအနေကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လိင်အင်္ဂါတွေ၊ တင်ပါးဆုံတွေ၊ တင်ပါးတွေ၊ ဆီးခုံတွေနဲ့ ပေါင်တွေဆီက အာရုံကြောများနဲ့ ကြွက်သားများဟာ တဖြည်းဖြည်း တင်းသထက် တင်းလာပါတော့မယ်။ တင်းရင်းတင်းရင်းကနေ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားပြီး သာယာမှုအပေါင်း ခညောင်းစွာ အားလုံး ပွင့်ထွက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါမယ်။ အဲဒါ ပြီးတာပါပဲ။
အဲသလို ပြီးလိုက်ချိန်မှာ သားအိမ်၊ ယောနိနဲ့ စအိုတို့က ၀.၈ စက္ကန့်မှာ တစ်ကြိမ်နှုန်းလောက်နဲ့ ကြုံ့ကြုံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ သိပ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြီးတာ မဟုတ်ဘဲ တော်ရုံပြီးတာဆိုရင် အဲလို ကြုံ့တာက သုံးကြိမ်မှ ငါးကြိမ်လောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကို အပြင်းထန်ဆုံး ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀ ကြိမ်မှ ၁၅ ကြိမ်အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ပြီးတာ အစစ်ပါ။
အဲလို ပြီးခြင်းဟာ အစေ့ကို တိုက်ရိုက် လှုံ့ဆော်လို့သော်လည်းကောင်း၊ ယောနိကို လှုံ့ဆော်လို့သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ခုလုံး ပေါင်းရုံးထားတဲ့ အပေါ်မှာသော်လည်းကောင်း မူတည်နေတတ်သလို အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း မတူပါဘူး။
တချို့အမျိုးသမီးတွေကျတော့ ပြီးချိန်မှာ တခြားကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ခြေဖျားတွေပါ ကုပ်သွားတတ်သလို မျက်နှာမှာလည်း မဲ့ရှုံ့သွားတတ်တယ်။ တချို့ကျတော့ ထူးဆန်းတဲ့ အသံတွေနဲ့ ညည်းညူတယ်။ အများစုကတော့ ရုတ်တရက် နာကျင်သွားသလို မျက်နှာထားမျိုးနဲ့ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ နာကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အရဆိုရင်တော့ သည်အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ ခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုတ်တရက် သတိလက်လွတ် ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
သိပ်သေချာတဲ့ အချက်တစ်ချက်က အမျိုးသမီးအများစုအတွက်က အစေ့ကို မပြတ် လှုံ့ဆော် မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ပြီးဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်းတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ပြီးချင်ရင်၊ ပြီးစေချင်ရင် အမျိုးသမီးက အပေါ်ကနေတဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဒါမှ သူ့ကိစ္စအတွက် သူ့ဘာသာ လိုသလို ချိန်ညှိလို့ ရနိုင်သလို အစေ့နဲ့ အမျိုးသားရဲ့ ငယ်ပါအရင်း ဆီးခုံအောက်နားက အသားနဲ့ မပြတ်ထိတွေ့အောင်လည်း ကြံဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သည်လောက်ဆိုရင် အမျိုးသမီး ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လိုတာထက် ပိုပြီး အတော်လေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
စာကြွင်း – တကယ် သည်ကိစ္စတွေကို လေ့လာ သိရှိထားတဲ့ ယောက်ျားဆိုရင် ကိုယ့်ဇနီးကိုယ် “ပြီးလား”လို့ မေးစရာ မလိုပါဘူး။ မမေးဘဲ သိနိုင်ပါတယ်။ မေးပြီဆိုကတည်းက အဲဒီ့ယောက်ျားသားဟာ အပြာစာအုပ်တွေ၊ အပြာရုပ်ရှင်တွေရဲ့ သွန်သင်မှု အလွဲအမှားတွေကိုသာ နှလုံးသွင်းထားလေတဲ့ “ငတုံး”လို့သာ မှတ်ကြပါခင်ဗျား။
ဆရာ အတ်တကြျောဘလောကျကနေ ပွနျယူထားတာပါ.. ဖိုမရေးရာ ကိစ်စစိတျမဝငျစား ရငျ သို့မဟုတျ ရိုငျးတယျထငျရငျ ..ဆကျမဖတျပါနဲ့လို့ပွောထားပါတယျ…
သညျဘလော့ကို ဖတျရတာ အသိ ဗဟုသုတ တိုးပါတယျ။ အခုလို ဖျောပွပေးတဲ့ ဆရာ့ကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ပွီးခွငျး မပွီးခွငျးဆိုတာ ဘာလဲ မသိဘူး…??? မသိလို့ မေးတာပါ။
ပထမဆုံးက အဖွရေကပျြဆို နှာခတြော၊ ဒါမှမဟုတျ သမျးဝတောနဲ့ နှိုငျးလိုကျရငျ အဖွရေကပျြတယျဆိုတာ ရှငျးသှားမှာပါ။ နှာခခြေငျြတဲ့အခါ ဟတျခြိုးလို့ ခလြေိုကျရခြိနျမှာ ဘယျလို ခံစားရလဲလို့ မေးရငျ ဘယျသူ ဖွနေိုငျမလဲ။ ကိုယျခန်ဒာမှာ အဲဒီ့အခြိနျ ဘယျလိုဖွဈသလဲ၊ ဘာလဲ၊ နှာခတြေယျဆိုတာ ဘာလဲ။ ဖွကွေညျ့စခေငျြပါတယျ။ လူတိုငျး ခဖြေူးပမေယျ့ နှာခတြေယျဆိုတာ ဘယျလိုလေးပါလို့ အငျမတနျ အပွောရ ခကျပါတယျ။ သမျးလိုကျတာလညျး အတူတူပါပဲ။ ပါးစပျကို အားရပါးရ ဟပွီး ဝါးခနဲ သမျးလိုကျတာတော့ မှနျတယျ။ အဲဒါ ဘာလဲ၊ ဘယျလို ခံစားရလဲဆိုတာ အလှနျ အဖွရေခကျလှပါတယျ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ပွီးတယျဆိုတာလညျး အလားတူပါပဲ၊ အဖွရေ ကပျြလှပါတယျ။
အမြိုးသားတဈယောကျအတှကျကတြော့ သူ့ငယျပါကနေ သုကျရညျတှေ ထှကျကုနျတာကို ပွီးတယျလို့ အပွတျအသား ပွောနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသမီးမှာကတြော့ အဲလို ရုပျလက်ခဏာနဲ့ လကျဆုပျလကျကိုငျ ပွစရာ ဘာမှ မရှိဘူး။
နောကျတဈခကျြက အနောကျတိုငျး သုတသေနမြားအရ အမြိုးသမီး ၂၅ % သာလြှငျ ခဈြတငျးနှောရငျး (ဝါ) လိငျဆကျဆံရငျးနဲ့ ပွီးနိုငျပါတယျ။ ယောကျြားကတြော့ ၉၀ % ကြျောဖွဈနတောနဲ့ကို ဒါဟာ အငျမတိ အငျမတနျ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲဆိုတာ သခြောနပေါတယျ။
မကွာသေးခငျက ကွုံခဲ့ဖူးတာ တဈခုရှိပါတယျ။ အသကျ ၆၀ ကြျော မိတျဆှသေဈတဈဦးနဲ့ ခရီးအတူသှားဖွဈကွရငျး ရငျးနှီးလာလို့ သညျကိစ်စတှေ ပွောဖွဈကွတဲ့အခါ သူက အမြိုးသမီးတှေ မပွီးဘူးလားလို့ တအံ့တဩ မေးလာပါတယျ။ တကယျတော့ သူဟာ မွေးရနပွေီဖွဈတဲ့ ကလေးသုံးယောကျ ဖခငျပါ။ ဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျး သူ့ကို မေးမိတယျ။ “ဘာလဲ အဈကိုကွီးက အဈကိုကွီး မိနျးမကို ပွီးလားလို့ မေးတတျတယျ မဟုတျလား”ဆိုတော့ ဟုတျတယျလို့ သူက ဖွပေါတယျ။ ဒါနဲ့ “ဟိုကလညျး ခေါငျးညိတျတယျ၊ ဒါမှမဟုတျ ပွီးတယျလို့ ပွောတာခညျြးပဲ မဟုတျလား”ဆိုတော့ သူက ဟုတျတယျတဲ့။ ကြှနျတေျာ့မှာ တအား ရယျခငျြသှားပမေယျ့ သူ့ကိုရော သူ့မိနျးမ အမယျကွီးကိုပါ သနားမိသှားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့မှာက သညျလိုအကွောငျးအရာတှကေို လူသိရှငျကွား ခပြွဆှေးနှေးလို့ မရတာမို့ အမြားစုဟာ ထငျတဈလုံးနဲ့ ရမျးကွိတျနကွေပါတယျ။ သူလို အမြိုးသားတှကေ ကြှနျတျောတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ၉၀ % မက ရှိနမှောလညျး အသအေခြာပါပဲ။
ကိုငျး… အမေးရှိတော့ အဖွရှေိလာပါပွီ။
ပထမဆုံး လိငျဆကျဆံမှု မစတငျခငျ အပြိုးကာလက အရေးကွီးပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှနေဲ့ မတူပါဘူး။ အမြိုးသားတှကေတော့ “ဆငျလိုကျတုနျးတောငျ ငယျပါတငျးနိုငျကွသူမြား”ဖွဈပမေယျ့ အမြိုးသမီးတှကေ ဆငျလိုကျတာ ဝေးစှ၊ စိတျထဲမှာ တဈခုခု ကွောငျ့ကွနမေိတာနဲ့ လိငျစိတျနိုးကွားဖို့ အငျမတနျ ခကျခဲပါတယျ။ ကိုယျရောစိတျပါ ကနျြးမာနပေမေယျ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အတှေးထဲမှာ မိသားစုကိစ်စတှေ၊ စီးပှားရေးကိစ်စတှေ၊ လူမှုရေးကိစ်စတှကေ လှမျးမိုးထားစမွဲပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ အပြိုးကာလနဲ့ သူတို့ကို စိတျပွောငျးအောငျ လုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ။
အပြိုးမှာ အဆငျ့ဆငျ့ရှိပါတယျ။ ပထမဆုံးက လငျကိုမယား စိတျလကျ ကွညျကွညျသာသာနဲ့ ကွညျကွညျနူးနူး ရှိအောငျ လုပျဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။ လကျကလေး ကိုငျတာ၊ ပါးကလေးနမျးတာ၊ ဆံပငျကလေး နမျးတာလေးတှဟော တကယျ့ အပြိုးပါပဲ။ အိမျထောငျသကျ နှဈပေါငျး ၃၀ ပဲ ရှိနနေေ မပကျြမကှကျ လုပျဆောငျရမယျ့အထဲမှာ အဲဒါတှေ ပါပါတယျ။
အဲဒီ့ကမှတဈဆငျ့ အရှိနျလေး နညျးနညျး ရပွီဆိုရငျ ပွငျသဈအနမျး၊ အနမျးစို စသဖွငျ့ ချေါတဲ့ နှုတျခမျးခငျြး နမျးတာက ဆကျလာရပါတော့မယျ။ သညျမှာလညျး လငျရယျ မယားရယျဖွဈလာမှတော့ တဈယောကျတဈယောကျ ရှံနလေို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ မွနျမာ အမြိုးသမီးအတျောမြားမြားက အဲဒီ့အနမျးကို မတုံ့ပွနျတတျဘူး။ ရှံ့နတေတျတယျ။ အဲတော့ အမြိုးသားက သငျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ အမြိုးသားကလညျး တတျဖို့ လိုတာပေါ့ဗြာ။ ပွငျသဈအနမျး ဋီကာကို နောကျကတြော့မှ တဈပုဒျ သတျသတျ ရေးပေးမယျ။ ဟုတျပွီလား။
အဲဒီ့အဆငျ့ကနေ နောကျတဈဆငျ့ တကျရာမှာလညျး မလောရပါဘူး။ ယောကျြားအမြားစု မှားတတျတဲ့ အမှားက နမျးရငျးနဲ့ သူ့လကျကွီးက အမြိုးသမီးရဲ့ ရငျသားဆီ တနျးရောကျသှားတတျတာပဲ။ ဟား… အလှဲကွီး ခငျဗြ။
အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ကိုယျခန်ဒာမှာ အာရုံနိုးတဲ့နရောတှေ မြားစှာ ရှိပမေယျ့ ရငျသားကို တနျးသှားတာကွီးက နရောမကဘြူးခငျဗြ။ ဖကျထားရငျးကနေ လကျမောငျးလေး ပှတျ၊ ကြောလေးပှတျ လုပျရတယျ။ ရငျခုနျလာအောငျ နှူးရတယျ။ သူ့လကျကွီးက ငါ့ရငျသားဆီ ရောကျလာတော့မှာ… ဟော… ရောကျတော့မယျ… ဟငျ… ဟုတျလဲ ဟုဘျဘူး… အဲဒီ့ ရှလေကျက ဘယျရောကျသှားရပွနျတာလဲ မောငျရယျ… ဟငျ့… ဆိုတာမြိုး ဖွဈလာအောငျ စိတျရှညျလကျရှညျ လုပျနိုငျလေ အခွအေနေ ကောငျးလလေပေါပဲ။
အဲလိုနဲ့ ရငျသားတှကေို ညငျညငျသာသာ ထိတှပေ့ေးရပါတယျ။ ခြိုလုံးလေးတှကေိုလညျး အတူတူပေါ့။ ညငျသာဖို့ လိုပါတယျ။ အမြိုးသမီးအနနေဲ့ သူ့ကို ခဈြတယျ၊ မွတျနိုးတယျ၊ ယုယတယျဆိုတဲ့ ခံစားမှု ရလာအောငျ လုပျရမှာပါ။ နှုတျခမျးခငျြး ဂဟဆေကျထားတာလညျး မပကျြစဘေဲ လကျက ရငျသား၊ ခွထေောကျက ခွထေောကျခငျြး ပှတျသီးပှတျသပျ ကယုကယငျ နပေေးနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
အဲဒီ့ကမှ အရှိနျလေး တျောတျောရပွီဆိုရငျတော့ နှုတျခမျးကို နရော ရှလေို့ ရပါပွီ။ သညျနရောမှာ ပဈမှတျက ခြိုလုံးတှေ ဖွဈပမေယျ့ အဲဒါကိုလညျး အလောတကွီး မဟုတျဘဲ သိုငျးသိုငျးဝိုငျးဝိုငျး ဖှဲ့ဖှဲ့နှဲ့နှဲ့လေး လုပျပေးတတျဖို့ လိုပွနျပါတယျ။ လုပျတတျရငျ အမြိုးသမီးဘကျက အတေျာ့ကို အဆငျသငျ့ဖွဈလာပါပွီ။
ပါးစပျက နရောရှသှေ့ားတော့ လကျက အားနတေယျ၊ ဘာလုပျရမလဲလို့ မေးရငျ အဖွရှေိပါတယျ။ လကျက ဗိုကျသား၊ ဆီးခုံ၊ ပေါငျ၊ ဒူး စတာတှကေို ညငျသာစှာ ထိတှပေ့ေးနနေိုငျပါတယျ။ သညျမှာလညျး ဦးတညျခကျြက ယောနိဖွဈပမေယျ့ ရငျသားမှာတုနျးကလိုပဲ အမြိုးသမီးက အလိုခငျြ အတောငျ့တဆုံး အခွအေနေ ဖွဈလာတဲ့အထိ ရဈသီ ရဈသီနဲ့ အရဈရှညျနိုငျလေ အကြိုးရှိလပေါ။ တကယျလို့ အဲဒီ့နရောကို လကျနဲ့ မဟုတျဘဲ ပါးစပျနဲ့ပဲ စခနျးသှားလိုသေးတယျဆိုရငျလညျး လကျက ယောနိကလှဲလို့ ခါးအောကျပိုငျး ကနျြတဲ့ နရောအနှံ့ကို ထိတှထေ့ားနိုငျပါတယျ။
ပါးစပျနဲ့ ထိတှဖေို့ ကွံရငျလညျး ခကျြခငျြး တနျးမသှားသငျ့သေးဘူး။ အမြိုးသမီး သိပျလိုခငျြလာအောငျ ရဈသီရဈသီ လုပျပေးဖို့ လိုတယျခငျဗြ။
ဒါဟာ အပြိုးကာလပါပဲ။ အတှအေ့ကွုံ နညျးသူ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ အဲဒီ့ အပြိုးကာလဟာ နာရီဝကျ ၄၅ မိနဈလောကျ အခြိနျယူဖို့ လိုပါတယျ။ အိမျထောငျသကျ ရငျ့နတေယျဆိုရငျတောငျမှ အပြိုးကို အဖငျြးဆုံး မိနဈ ၂၀ လောကျ အခြိနျယူရပါမယျ။ ကွာလေ၊ အခြိနျဆှဲနိုငျလေ၊ အမြိုးသမီးအတှကျ အရှိနျတကျလပေါ။
အဲလို အရှိနျတကျလာတဲ့အခါမှာတော့ အမြိုးသမီးဟာ မသိမသာလေး နှေးလာပါလိမျ့မယျ။ စိတျဆန်ဒတှေ တကျကွှလာပါလိမျ့မယျ။ သူ့ကိုယျခန်ဒာက သှေးတှကေလညျး ယောနိနဲ့ ယောနိထိပျက အကွောဆိုငျ အဖုအထုံး (အစလေ့ေး)ဆီကို တိုးနပေါပွီ။ သညျအခြိနျမှာ ယောနိအတှငျးပိုငျးနံရံကလညျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ခြှေးသီးခြှေးပေါကျမြားကသြလို စိမျ့ရာက နဈလာပါတော့မယျ။ သညျအခြိနျမှာမှ လိငျဆကျဆံမှု လုပျရတော့မှာပါ။
အဲလိုနဲ့ အာရုံက ဆငျ့ကာ ဆငျ့ကာ နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ သှေးက တငျပါးဆုံရိုးတဝိုကျမှာ ဆကျပွီး တိုးနပေါတယျ။ အသကျရှူလညျး ပွငျးလာတယျ။ နှလုံးခုနျနှုနျးလညျး တကျလာပါပွီ။ ယောနိရဲ့ အတှငျးပိုငျးကလဲ ငယျပါကို ဆုပျညှဈဖို့အတှကျ ကဉျြးသှားသလို အပွငျပိုငျးကကပြွနျတော့ ငယျပါကို ကွိုဆိုဖို့အတှကျ ကယျြလာပါတယျ။
အားလုံး အဆငျပွနေပွေီ၊ အနှောငျ့အယှကျ ကငျးနပွေီ၊ ဖုနျးလညျး ထမမွညျဘူး၊ ကိုယျ့ခငျပှနျးကလညျး အခွအေနကေို ဆကျထိနျးထားနိုငျမယျဆိုရငျတော့ လိငျအင်ျဂါတှေ၊ တငျပါးဆုံတှေ၊ တငျပါးတှေ၊ ဆီးခုံတှနေဲ့ ပေါငျတှဆေီက အာရုံကွောမြားနဲ့ ကွှကျသားမြားဟာ တဖွညျးဖွညျး တငျးသထကျ တငျးလာပါတော့မယျ။ တငျးရငျးတငျးရငျးကနေ ဟာခနဲ ဖွဈသှားပွီး သာယာမှုအပေါငျး ခညောငျးစှာ အားလုံး ပှငျ့ထှကျသှားသလို ခံစားလိုကျရပါမယျ။ အဲဒါ ပွီးတာပါပဲ။
အဲသလို ပွီးလိုကျခြိနျမှာ သားအိမျ၊ ယောနိနဲ့ စအိုတို့က ၀.၈ စက်ကနျ့မှာ တဈကွိမျနှုနျးလောကျနဲ့ ကွုံ့ကွုံ့သှားပါလိမျ့မယျ။ သိပျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ပွီးတာ မဟုတျဘဲ တျောရုံပွီးတာဆိုရငျ အဲလို ကွုံ့တာက သုံးကွိမျမှ ငါးကွိမျလောကျသာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျ့ကို အပွငျးထနျဆုံး ပွီးတယျဆိုရငျတော့ ၁၀ ကွိမျမှ ၁၅ ကွိမျအထိ ဖွဈတတျပါတယျ။ အဲဒါမှ ပွီးတာ အစဈပါ။
အဲလို ပွီးခွငျးဟာ အစကေို့ တိုကျရိုကျ လှုံ့ဆျောလို့သျောလညျးကောငျး၊ ယောနိကို လှုံ့ဆျောလို့သျောလညျးကောငျး၊ နှဈခုလုံး ပေါငျးရုံးထားတဲ့ အပျေါမှာသျောလညျးကောငျး မူတညျနတေတျသလို အမြိုးသမီး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျလညျး မတူပါဘူး။
တခြို့အမြိုးသမီးတှကေတြော့ ပွီးခြိနျမှာ တခွားကိုယျခန်ဒာအစိတျအပိုငျးတှေ ဖွဈတဲ့ ခွဖြေားတှပေါ ကုပျသှားတတျသလို မကျြနှာမှာလညျး မဲ့ရှုံ့သှားတတျတယျ။ တခြို့ကတြော့ ထူးဆနျးတဲ့ အသံတှနေဲ့ ညညျးညူတယျ။ အမြားစုကတော့ ရုတျတရကျ နာကငျြသှားသလို မကျြနှာထားမြိုးနဲ့ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ အမှနျတော့ နာကငျြတာ မဟုတျပါဘူး။
နယျသာလနျနိုငျငံ တက်ကသိုလျတဈခုရဲ့ နောကျဆုံးတှရှေိ့ခကျြအရဆိုရငျတော့ သညျအခြိနျမှာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဦးနှောကျထဲက ကွောကျရှံ့မှုနဲ့ ခံစားမှုမြားကို ထိနျးခြုပျနတေဲ့ အစိတျအပိုငျးတှေ ရပျဆိုငျးသှားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ရုတျတရကျ သတိလကျလှတျ ဖွဈသှားတယျပေါ့။
သိပျသခြောတဲ့ အခကျြတဈခကျြက အမြိုးသမီးအမြားစုအတှကျက အစကေို့ မပွတျ လှုံ့ဆျော မပေးနိုငျဘူးဆိုရငျ ပွီးဖို့ အငျမတနျ ခဲယဉျးတယျဆိုတဲ့ အခကျြပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ လိငျဆကျဆံရငျးနဲ့ ပွီးခငျြရငျ၊ ပွီးစခေငျြရငျ အမြိုးသမီးက အပျေါကနတေဲ့ ကိုယျနဟေနျထားက အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။ ဒါမှ သူ့ကိစ်စအတှကျ သူ့ဘာသာ လိုသလို ခြိနျညှိလို့ ရနိုငျသလို အစနေဲ့ အမြိုးသားရဲ့ ငယျပါအရငျး ဆီးခုံအောကျနားက အသားနဲ့ မပွတျထိတှအေ့ောငျလညျး ကွံဆောငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
သညျလောကျဆိုရငျ အမြိုးသမီး ပွီးတယျဆိုတာနဲ့ ပတျသကျလို့ လိုတာထကျ ပိုပွီး အတျောလေး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ရှငျးပွနိုငျခဲ့ပွီလို့ ယူဆပါတယျ။
စာကွှငျး – တကယျ သညျကိစ်စတှကေို လလေ့ာ သိရှိထားတဲ့ ယောကျြားဆိုရငျ ကိုယျ့ဇနီးကိုယျ “ပွီးလား”လို့ မေးစရာ မလိုပါဘူး။ မမေးဘဲ သိနိုငျပါတယျ။ မေးပွီဆိုကတညျးက အဲဒီ့ယောကျြားသားဟာ အပွာစာအုပျတှေ၊ အပွာရုပျရှငျတှရေဲ့ သှနျသငျမှု အလှဲအမှားတှကေိုသာ နှလုံးသှငျးထားလတေဲ့ “ငတုံး”လို့သာ မှတျကွပါခငျဗြား။
Previous: ပရဟိတ လုပ်တာထက် ပိုအကျိုးများမယ့် လုပ်ရပ်
Next: Emotional Intelligence(EI) ရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုး